Nike CFO ọhụrụ so na United Airlines Board of Directors
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Nike CFO ọhụrụ so na United Airlines Board of Directors
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Enyi malitere ọrụ ya na ụlọ akụ itinye ego na Morgan Stanley na Goldman Sachs.
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) kwuputara taa na Matthew Friend ga-esonye na Board of Directors. Enyi, ugbu a osote onye isi oche na onye isi ego nke Nike, Inc., na-eweta ihe karịrị afọ iri abụọ nke ego ụlọ ọrụ na ahụmịhe atụmatụ na Board nke ụgbọ elu.
"Ka anyị na-esi na ọrịa a pụta dị ka onye ndu na ụlọ ọrụ ahụ ma dị njikere ịkwalite azụmahịa anyị, United ga-erite uru dị ukwuu na ikike ego Matt na nlekọta nke otu n'ime ụdị ndị ahịa na-eduga na mbara ala," kwuru. United Onye isi oche Scott Kirby. "Na mgbakwunye, afọ ya nke ahụmịhe ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ ga-enyere aka mee ka mbọ anyị na-agba iji nọgide na-abụ ike maka ịdị mma n'ofe mba na gburugburu ụwa."
"Oge ọ bụla anyị wetara onye òtù bọọdụ ọhụrụ, anyị na-elekwasị anya n'ịgbakwunye ndị ndu nwere ahụmahụ nwere usoro nka na echiche pụrụ iche nke ga-erite uru. United, "Ted Philip, Onye isi oche nke Board of Directors kwuru. "Ka ụwa na-emepe emepe na ọchịchọ njem na-aga n'ihu na-alọghachi azụ, United Board ga-erite uru na Matt zuru ụwa ọnụ ego, atụmatụ na atụmatụ atụmatụ azụmahịa iji nyere aka duzie ụgbọ elu ka ọ na-akọwapụta ọdịnihu ga-aga nke ọma."
"United egosila ezigbo onye ndu n'ime ọnwa 18 gara aga ma rụọ ọrụ iji kọwapụta onwe ya n'anya ndị ọrụ ya, ndị ahịa na obodo ọ na-eje ozi," ka Enyi kwuru. "Ụgbọ elu ahụ kpebisiri ike itinye ego na nke a, enwere m obi ụtọ ịbanye na bọọdụ ahụ n'oge a na-atọ ụtọ na akụkọ ntolite ya."
Akpọrọ enyi EVP na CFO nke Nike, Inc. na Machị 2020. Kemgbe ahụ, o nyerela aka iduzi Nike site na mgbanwe mgbanwe azụmahịa dị ịrịba ama. Na mbụ, Enyi na-arụ ọrụ nke CFO maka Nike Operating Segments na VP nke Mmekọahụ Investor. Ọ na-ejekwa ozi dị ka CFO nke Nike Brand, Global Brands & Functions, Emerging Markets, na dị ka VP nke Ụlọọrụ Strategy na Development. Enyi bụ onye otu Nike's Executive Leadership Team na onye nnọchi anya njikwa njikwa na Kọmitii Audit & Finance nke Nike, Inc. Board of Directors.